जिससको चुनावका लागि एमाले र जसपासंग सहमति भएको छ । सचिव गुप्ता र अहमद :: कृष्णा प्र. कुशवाहा :: जिससको चुनावका लागि एमाले र जसपासंग सहमति भएको छ । सचिव गुप्ता र अहमद
जिससको चुनावका लागि एमाले र जसपासंग सहमति भएको छ । सचिव गुप्ता र अहमद
बिहीबार, जेठ २६, २०७९ कृष्णा प्र. कुशवाहा
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) पर्साको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र जसपा संगै मिलेर जाने सहमति भएको नेकपा एमाले पर्साका जिल्ला सचिव एवम छिपहरमाई गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज गुप्ताले जानकारी गराउनु भएको छ । सहमति अनुसार नै जिसस पर्साको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिइएको जसपाका जिल्ला सचिव तबरेज अहमदले बताउनु भयो । उनका अनुसार गठबन्धन नगरिएको सहमतिमै संगै निर्वाचनमा जाने सहमति भएको बताउनु भयो । भोलि हुने जिसस पर्साको निर्वाचनमा मतगणना पक्षि परिणम सबैको अगाडि आउने बताउनु भयो ।
जिससको निर्वाचनका लागि परेको उम्मेदवारहरुको दलीय समिकरण हेर्दा भने जसपा र एमालेले सहमति गरेर उम्मेदवारी दिएको प्रष्ट देखिन्छ । जसपाबाट जिससको सभापतिमा निरन्जन कुमार सर्राफको उम्मेदवारी परेको छ । उपसभापतिमा जसपाले उम्मेदवारी नै दिएको छैन । उपसभापतिमा एमालेका पुरण कुर्मीको उम्मेदवारी परेको छ । एमालेले सभापति पदमा उम्मेदवारी दिएको छै्रन । जसपाले गठबन्धन तोडेर एमालेसंग सहमति गरेपछि नेपाली काँग्रेसले भने सभापति , उपसभापति सहित सदस्य पदमा एउटा लोसपालाई दिइ लोसपासंग गठबन्धन गरी उम्मेदवारी दिएको नेपाली काग्रेसका नेता श्याम पटेलले बताए ।
जसपाको र काँग्रेससंग जिससको नेतृत्वमा कुरा नमिले पछि जसपाले एमालेसंग सहमति गरेर जिससको सभापति र ३ सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएको छ । सहमति अनुसार नै मतदान गरिनै उहाँहरुले जिकिर गर्नु भएको छ ।
एमाले र जसपा एकआपसमा समझदारी गरेर नै उम्मेदवारी दिएका छन् । जिससको निर्वाचनमा जिल्लाका १४ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरि कुल २८ जना मतदाता रहेका छन् । ती मध्ये काँग्रेसको १२ , एमालेका १० , जसपाका ५ र लोसपाका १ जना मतदाता रहेका छन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २६, २०७९ १४:३५